F4V ayaa qaab aad u muhiim ah tan iyo 2000 hore sida ay wax caadi ah oo la videos flash ah. Isticmaalka Adobe Flash Player, qaabab file ka mid ah ayaa la wadaago internet-ka. Inkastoo F4V la mid tahay files FLV dhinacyo badan, ay awoodaan si ay u taageeraan H.264 video iyo sidoo kale Content ACC Audio yihiin. Socon u fara badan portals online, qaab tani ma aysan ciyaarin qalabka aad durugsan sida iPhone, iPod, iyo casriga ah, oo halkan, waxaa loo baahan yahay in aad si loogu badalo file a F4V gaar ah si qaab MP4 ah. Qaab MP4 ayaa, sida aynu wada ognahay, waa la jaan qaada qalab ku dhowaad kasta warbaahinta iyo desktops sidoo.
Part1: Best F4V in Converter MP4: Wondershare Video Converter Ultimate
Part2: F4V Free in Converter MP4: Wondershare Video Converter Free
Part3: Aqoonta Extended u F4V iyo MP4
Wondershare Video Converter Ultimate iyo tilmaamaha ay:
Sida codsi desktop awood badan, Wondershare Video Converter Ultimate ayaa ku guulaystay in uu caawiyo macaamiisha badan oo leh baahida ay diinta ka video. Ku cayaaridda tiro ka mid ah qaabab ayaa hadda noqday fudud sida Wondershare Video Converter Ultimate la Timaadda awoodda files ka baaraandegidda ka qaab oo kala duwan iyo bixinta wax soo saarka sida shuruudaha aad. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, daawashada, wadaagga, iyo riyaaqayaa videos at qalab kasta oo la sameeyo macquul sida users hadda dooran kartaa qaabab kala duwan, halka diinta videos ay.
Sida loo rogo ama file F4V ah in File MP4 ah Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate ?
Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u sameeyaan qaab beddelidda,
Marka aad soo bixi Mudanayaasha ka soo website Wondershare ah, rakibi barnaamijka. Si aad u hanuuntaan doonaa iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo. Kadib markii geedi socodka rakibo dhamaato, bilaabin barnaamijka, iyo daqiiqad qaado si aad wax ka barato suuqa kala barnaamijka.
Uploaded file la doonayo F4V barnaamijka. Tan waxaa la samayn karaa in 2 siyaabo. Marka hore, waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi file furmo interface ah, ama waxaad isticmaali kartaa habka koombiyuutarka dhaqanka. Waqtiga lagu qaato u Upload in ay buuxiyaan korkiisa size faylka ku xirnaan lahaa.
Marka faylka wax laga uploaded, xulo qaab saarka ka soo box gacanta midig. Sanduuqa ku jira tiro ka mid ah qaabab, la jaan qaada tiro ka mid ah qalabka. Tan iyo markii aanu diinta naga file in MP4, waxaan dooran qaab ku habboon ka sanduuqa wada hadal ah.
Arrintan oo uu weheliyo xarunta qaab beddelidda, Wondershare Video Converter Ultimate sidoo kale bixisaa qalab tafatir oo kuu ogolaanaya in aad ah u bedelo aad file isticmaalaya filtarrada, saamaynta, kala guurka midabka, iyo wax badan oo dheeraad ah. Interface tafatirka waa cadaalad ah oo fudud oo loo isticmaali karaa qof kasta.
Kadib markii aan bad file aad saxar ah, dib u furmo suuqa interface tagaan, oo guji badhanka 'badalo' on hoose ee suuqa kala. Tani bilaabayso hawlaha qaab beddelidda ka F4V in MP4. Waqtiga lagu qaato u raanta oo gebi ahaanba ku xiran tahay inta uu le'eg yahay faylka.
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Free si loogu badalo qaab file ARF in MP4?
Download iyo rakibi Mudanayaasha ka Wondershare website-ka. Guji file ka soo dejisan in la bilaabo geedi socodka rakibo. Si aad u hanuuntaan doonaa iyada oo loo marayo hanaanka la rakibo, oo ka dib markii habka dhamaato, furo suuqa kala barnaamijka.
Sida aad ka baran suuqa kala barnaamijka, aad dareento in ay jiraan laba siyaabood oo aad u dhex gali kartaa oo aad video. Kuwa dooneysa isticmaali kartaa 'jiita iyo dhibic' habka, halka ikhtiyaarka Upload caadiga ah sidoo kale waxaa la heli karaa.
KU XIRAN YAHAY TIRADA faylka, habka Upload ka qaadan lahaa in muddo ah si uu u dhameystiro. Ka dib markii koombiyuutarka waxaa loo sameeyaa, xulo qaab wax soo saarka ee aad jeceshihiin faylka la gediyay, taas oo ay dhacdo in tani ay tahay MP4 ah.
Arrintan oo uu weheliyo xarunta qaab beddelidda, waxaa sidoo kale waa ikhtiyaar u sixiddiisa aad file. Interface tafatirka waa fududahay in la fahmo oo u ogolaanaya uga faaidaysan yar in la sameeyo. Waxaad isticmaali kartaa filtarrada, saamaynta, midabka kala guurka iyo wax ka badan.
Keydso video ka dib marka aad la sameeyo la-socodka tafatir ah. Raac waxa ay aad riixdo batoonka 'badalo ". Waqtiga lagu qaato u diinta si ay u buuxiyaan korkiisa size faylka ku xirnaan lahaa.
3.1: Waa maxay file F4V ah?
F4V waa kordhin file u qaab warbaahinta file weel Flash ah. Files F4V awood Shockwave gundhig. Files F4V taageeraan H.264, sidoo kale loo yaqaan MPEG-4 AVC (Advanced Video sireed). H.264 waa heer video riixo oo bixiya riixo si weyn u sii weyn tahay ka horreeyay.
3.2: Sida loo ciyaaro file F4V on Windows iyo MAC?
F4V (Flash MP4) ayaa lagu yaqaano in ay isticmaalaan qaabka MP4 ISO. Qaab Tani waxaa inta badan ku salaysan qaab weel QuickTime Warbaahinta Apple ee. Sidaa darteed, si ay u ciyaari files F4V ku saabsan habka MAC, waxaa jiri lahaa baahida loo qabo in qaar ka mid ah codsiyada multimedia gaar ah. Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala in ay haystaan ​​playlists caadadii ay ku raaxaysan files F4V iyaga oo aan wax-ka-qabashada.
Qaar ka mid ah codsiyada ku qoran yihiin hoos:
Ciyaaryahanka VLC Media
Đó Media Player
Waqtiga Real Player
Sida loo Download Facebook Video inay MP4 ee tayo sare leh?
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan F4V galay MP4 la Loss Tayada Zero